Androm-pirenena ho an'ny fanjarian-tsakafo (JNN) | Primature
Antsirabe, faha 6 jolay 2018– “Tsy azo ekena intsony ny fanaovana takalon’aina ny mpianatra na eo aza ny fitakiana sendikaly ka tokony handray ny andrikiny ny tsirairay” hoy ny Praiministra Ntsay Christian raha nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny fanamarihana ny Andron’ny Fanjariantsakafo (JNN) tany Antsirabe androany maraina.
Koa satria mahakasika betsaka ny zaza ny resaka fanjariantsakafo dia nohamafisin’ny Lehiben’ny Governemanta tamin’ny lahateniny fa tsy azo ekena ihany koa ny fampiasana ankizy tsy ampy taona ho fanajana ny zon’ny ankizy.
Ny Ofisim-pirenena momba ny Fanjariantsakafo (ONN) izay Ratsamangaika ao amin’ny Fiadidiana ny Praiministra no mpikarakara ny fankalazana . « Fianakaviana vanona, sehatry ny fanjariantsakafo, antoky ny fampandrosoana maharitra »: io no lohahevitra nanompanana ny fanamarihana amin’ity taona ity. Antony: noho ny ady amin’ny tsy fanjariantsakafo izay aompana betsaka anivon’ny fianakaviana, ary ny ady atao dia làlana iray izorana any amin’ny fampandrosoana.
Nosafidiana manokana ny faritra Vakinankaratra noho izy anisan’ireo faritra telo tena ahitana tahan’ny tsy fanjariantsakafo ambony eo amin’ny zaza latsaky ny 5 taona (65%), na dia anisan’ireo faritra mamokatra ara-pambolena, indrindra ny legioma samihafa. Ankoatr’izay, i Vakinankaratra dia anisan’ireo faritra nanombohana ny tetikasa FAFY.
Anisan’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny sehatry ny Fanjariantsakafo ka mandray anjara amin’ny JNN ankoatry ny avy amin’ny Ministera samihafa, ny fikambanana eto an-toerana sy iraisam-pirenena maro toy ny UNICEF sy ny JICA, ny USAID, ny OMS, ary olo-manan-kaja hafa toy ny Senatera sy ny maro hafa.
← Fitsidihan’ny Praiminisitra tao amin’ny Faritra Vakinankaratra
Présentation des résultats de la revue après action de la réponse à l’épidémie de peste →